किन पुगे प्रचण्ड जीवनसंगिनी सीतासहित म्याग्दीको तातोपानीमा ? – Pahilo Page
किन पुगे प्रचण्ड जीवनसंगिनी सीतासहित म्याग्दीको तातोपानीमा ?
२६ कार्तिक २०७५, सोमबार २०:१८ 949 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज म्याग्दी जिल्लाको तातोपानी पुगेका छन् । जीवनसंगिनी सीता दाहालको उपचारको लागि अध्यक्ष प्रचण्ड परिवारसहित तातोपानी नुहाउन म्याग्दी गएका हुन् ।
चिकित्सकहरुको सल्लाहअनुसार प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि तातोपानीमा नुहाउनका लागि लिएर गएका हुन् । बेनी नगरपालिका– ४ मा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयको रुपमा प्रसिद्ध तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्दा छाला, नशा, ग्याष्ट्रिक, बाथ लगायत रोगका बिरामीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले मानिसहरु तातोपानीमा नुहाउन आउने गरेको कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डसँग जीवनसंगिनी सीता दाहालसहित, छोरी गंगा दाहाल, स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा ‘प्रताप’ रहेका छन् । अध्यक्षका साथमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उहाँकी जीवनसंगिनी नैनकला थापा पनि तातोपानी पुगेका छन् ।